Na nkwanye ugwu dị ukwuu nye ndị ọrụ ibe m, enwere m obi abụọ oge niile mgbe ndị ọkachamara na-enye ụdị atụmatụ na ndụmọdụ a. Ejiri m obi eziokwu na-arụ ọrụ na na ngalaba azụmaahịa ihe karịrị afọ iri abụọ ugbu a ma enweghị m ike icheta otu atụmatụ azụmaahịa nke rụrụ ọrụ ka atumatu.
Ọ bụ kpam kpam iberibe… Ekwenyere m na-eche echiche putara ighe dị mkpa. Emechakwa, ọ dị mkpa ka ị mara ebe ntụzịaka izugbe ahụ dị tupu ịdọpụta ihe na-akpali akpali. Agbanyeghị, ọ ga-akara m mma ma mmadụ buru ụzọ gbaa ọkụ wee nwee ebumnuche karịa ịrụ ọrụ ọnwa ole na ole iji tọọ egbe nke nwere ike ọ gaghị akụ bullseye ma ọlị.
M na-ahụkarị ka azụmaahịa na-ada tupu ha amalite n'ezie. Ha na-atụ egwu ọdịda nke na ha na-akpọnwụ ma na-agaghị ewere ihe egwu dị mkpa iji gaa n'ihu. Legharịa anya na azụmahịa ndị na-aga nke ọma. Hà na-eme nke ọma n’ihi na ha mere atụmatụ n’ụzọ na-enweghị ntụpọ? Ma ọ bụ ha na-enwe ihe ịga nke ọma n'ihi na ha dị gara gara ma nwee ike ịhazigharị atụmatụ ha dịka ihe dị mkpa maka atụmanya ha, ndị ahịa ha na ụlọ ọrụ ha chọrọ?